Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika - Page 1 | Fihetseham-po simika
Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika - Pejy 1
Ny zavatra mahaliana momba ny singa simika - Nohavaozina 2022
Inona no singa misy eto an-tany, ao amin'ny Universe na ao amin'ny laboratoara fotsiny. Ny hiafaran'ny singa vaovao indrindra, ny voninahitra sy ny loza ateraky ny mpihaza singa vaovao ... Ny fahitana vaovao momba ny singa simika ao amin'ny foibe fikarohana lehibe manerana izao tontolo izao dia manampy ny olona hanitatra ambaratonga faharoa, hahita zavatra mahaliana maro momba ny tontolo voajanahary.
Zava-misy mahaliana momba ny helium
Helium no singa tsy fahita firy voalohany eto amin'ny latabatra rafitra. Ao amin'ny Universe, izy no mitana ny laharana faharoa amin'ny haben'ny hydrogen element.
Zava-misy mahaliana momba ny lithium
Ny lithium dia singa metaly alkaly, hita ao amin'ny sela fahatelo ao amin'ny rafitra latabatra tsindraindray. Ny lithium no metaly maivana indrindra amin'ny vy rehetra ary afaka manapaka antsy.
Zava-mahaliana momba ny Beryllium
Beryllium no metaly alkaly mora indrindra eto an-tany. Beryllium dia hita amin'ny vato sarobidy toy ny emeraoda sy aquamarine. Beryllium sy ny fitambaran'izy ireo dia samy karzinogenika.
Zava-misy mahaliana momba an'i Carbon
Ny karbaona dia singa tsy metaly amin'ny sela fahenina ao amin'ny latabatr'ireo rafitra vanim-potoana. Ny karbaona dia iray amin'ireo singa manandanja indrindra amin'ny fiainana rehetra, izy io dia fantatra ihany koa amin'ny aoriana.
Zava-mahaliana momba ny Nitrogen
Ny nitroka dia singa tsy metaly ao amin'ny sela faha-7 amin'ny latabatra tsindraindray. Amin'ny maha-singa lehibe indrindra amin'ny rivotra azy dia mamokatra loko marevaka mahafinaritra amin'ny aurora izy io.
Zava-mahaliana momba ny Oksizena
Ny oxygen dia singa tsy metaly amin'ny sela faha-8 amin'ny latabatra maharitra. Io no singa fahatelo be indrindra eto an-tany ary singa lehibe indrindra amin'ny olona.
Zava-mahaliana momba an'i Neon
Neon dia gazy tsy fahita firy ao amin'ny sela faha-10 ao amin'ny latabatra rafitra maharitra. Io no singa fahefatra be indrindra indrindra eto amin'izao tontolo izao ary volomboasary mena mamirapiratra amin'ny fambara varotra.
Zava-mahaliana momba ny flluorine
Fluorine dia metaly mahazatra sy tena miasa. Izy io no manana electronegativa avo indrindra amin'ny singa rehetra.
Zava-misy mahaliana momba ny chromium
Chromium dia mpikambana ao amin'ny vondrona singa vy tetezamita. Fantatra fa manampy sparkle sy sandan'ny mineraly.
Zava-mahaliana momba an'i Gallium
Gallium dia ny première nomena anarana avy tamin'ny akoho, izay ny asany tamin'ny fahitana ny endriny dia nameno ny toerana nambaran'ny mpahay simia Mendeev.
Zava-misy mahaliana momba an'i Nickel
Nickel no metaly tetezamita fahadimy indrindra eto an-tany, miseho be dia be ao amin'ny crust sy ny tany. Ny nikela miaraka amin'ny vy dia singa roa iraisan'ny mete
Zava-misy mahaliana momba ny Cobalt
Ny kobalta singa dia manana hatsarana, hery ary fiaraha-miasa tena tsara. Kobalt dia metaly volafotsy manjelanjelatra mafy ary mahery be ihany koa.
Zava-misy mahaliana momba ny vy
Ny vy dia fantatra fa singa fototra amin'ny fiainana eto an-tany. Ilaina amin'ny vatan'olombelona izy io ary ampiasaina amin'ny zavatra an-trano maro.
Zava-mahaliana momba ny Manganese
Manganese - singa iray miorina amin'ny fototry ny fotosintesisan'ny zavamaniry, miady amin'ny radika maimaim-poana, manamafy ny vy, mamorona nodule miafina any amin'ny ranomasina.
Zava-misy mahaliana momba an'i Vanadium
Ny Vanadium dia singa iray fantatra amin'ny tantaram-piainany misafotofoto ary in-droa no hita. Ny anaran'i Vanadium dia nomena anarana taorian'ny andriamanibavin'ny hatsaran-tarehy Scadinavia "Vanadis".
Zava-misy mahaliana momba an'i Titan
Ny anaran'i Titan dia nomena anarana taorian'ny andriamanitra grika, ilay singa fahasivy be indrindra ao amin'ny hoditry ny tany.
Zava-mahaliana momba ny Scandium
Scandium no vy tetezamita voalohany, hita tamin'ny faramparan'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo sy ny singa faha-36 be indrindra amin'ny vovoky ny tany.
Zava-misy mahaliana momba ny kalsioma
Ny kalsioma dia fantatra ho ny vato manorina lehibe indrindra amin'ny taolana, ny faha-5 be indrindra eto an-tany. Ny fitambaran'ny kalsioma, calcium carbonate, dia mahazatra
Zava-misy mahaliana momba ny hidrogen - singa maivana indrindra amin'ny latabatra maharitra.
Ny hidrogen no singa voalohany ao amin'ny tabilaon'ny rafitra vanim-potoana. Ny hidrogen dia fantatra ho ny maivana indrindra amin'ny rehetra, ny be indrindra indrindra eo amin'izao rehetra izao, ny singa ilaina amin'ny fiainana
Fanandramana majika simia
Simia amin'ny tontolo iainana
Simia amin'ny fiainana andavanandro
Famoronana lehibe amin'ny simia
Simia malaza sy mahaliana